Indonesia in Focus: Dembi oo dhan waa la cafiyi doonaa Ilaah.
Dembi oo dhan waa la cafiyi doonaa Ilaah.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (364)
(Qaybta saddex boqol iyo afar iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, September 6, 2015, 22:00 pm).
Ilaah in uu hadalkiisii ku Quraanka iyo Sunnaha (al-barteen / xadiiska) aadanaha damaanad in Eebe oo dhan Dambiyada Addoomadiisa (aadanaha) dambi dhaafo inta ay toobad (dambidhaafna waydiista) hana la shirk (la wadaajiyo Eebe Mushrikiin) ama ka tago shirk geerida horteeda (dhinto), isla markiiba toobad (u dambidhaaf warsan Ilaah dembiyadooda oo dhan in lagu sameeyey) si dhab ah oo si joogto ah loo fuliyo tiirarka Islaamka.
Ilaah albaabka nimco iyo hidayahnya doonayo aadanaha oo dhan si ay u tagaan samada, laakiin Ilaah ayaa sidoo kale ka digay in Ibliisku (Shaydaan) waa ninka tirada cadow mid, sababtoo ah Ibliis doonayaan in dadka qaar ka mid ah doonayaan inay raacaan wadadii uu naar.
Eebe ee Quraanka iyo Sunnaha bara aadanuhu sida (cuntada) si aanu u dagaalami karnaa ama Shaydaan ka nolosheena ka tuuray.
Marka tilmaamaha Quraanka iyo Sunnaha waxaannu raaci Alle idmo waxaan ku faraxsan yahay in ay ku noolaadaan dunida oo dhan (gaaban / ku meel gaar ah), qabriga (barzakh) iyo Aakhiraba waxaa waarta nooca doonaa.
Tafsir Al Mu'min Aayadda 1-12
Surah Al Mu'min (Mu'miniintu)
Suurad 40. 85 paragraph. Makkiyyah
Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee, Dhaafe Naxariista.
Aayaadka 1-9: Ka hadalka ku saabsan mucjiso ah oo ka mid ah Quraanka, Eebe dambi dhaaf Subhaanahu wa Allaah ka dhanka ah Dambiyada Addoomadiisa kuwa toobad keena, mucaaradka ku ah Diinta Islaamka dhab ahaan la kulmaan failure, amarka in laydin khiyaanayn by barwaaqada ay kuwa gaalada, sawir Malaa'igta kii 'carshiga iyo kuwa Gaararkiisa ah, halkaas oo ay ku baryayaaye, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee Mu'miniinta ah una Dambi Dhaaf warso u.
Tarjamada Surah Al Mu'min Aayaadka 1-9
1. Ha tusin.
2.  Kitaabka (Quraanka) waxaa laga Ilaaha Qaadirka ah  joogaba (wax kasta),
3. Yaa dembiyo cafiya haddana  oo aqbala loobada iyo ciqaab adag ; kuwaas oo hadiyadda.  Waxaa Ilaah kale ma jiro (istaahilo in la caabudo), laakiin isaga. Kaliya Isaga (Quraanka wayse) dib.
4.  Ma jirto dood ku saabsan aayaadka Eebe kuwa gaaloobey mooyee. Sidaas daraaddeed ha (toosin kara) dagin guusha ay gaareen dadaallada ay dalka  dhan.
5.  iyaga ka hor, Qoomkii Nabi Nuux iyo xulufadiisa ka dib markii ay  ayaa beeniyay (Rasuul) iyo tartanka kasta ayaa la qorsheeyey (khiyaanada) rasuulkoodii inay maxaabiis ahaan  oo ay ku doodi leh (Sababta) been ah inuu wax baabbi'iyo runta; Sidaa darteed, waxaan ay (Cadaab) iyaga  qabta. Markaas sida (xanuunka) caddibaadda ?
6 Oo sidaas  leeyihiin qodobada sida xaqiiqada ah ay khuseyso Eebihiin ka dhan ah gaalada, (waa) in xaqiiqadu tahay inay yihiin ehelu Jahannamo.
7.  (Malaa'igta) xambaarsan carshiga  iyo (Malaa'igta), kuwaas oo ku wareegsan yihiin  tasbiixso oo ku mahadi Eebahood  oo ay rumaysan yahay isaga waxayna u dambidhaaf warsan kuwa rumeeyey  (madaxdii) kamidka ahayd,  "Eebow, nimcada iyo aqoonta jira ee kaa daboolaya wax walba oo , ku siiyo dambi dhaaf in kuwa toobadkeena ee  iyo raacna Jidka (Diinta) - mu , oo waxaan iyaga ku badbaadin ka Cadaabka Jahannamo, .
8. Eebow, oo wuxuu ku riday oo wuxuu galay samada 'Eden oo waxaad iyaga ku  ballan qaaday, iyo kuwa xaqa ah  ka mid ah ay Aabayaalkood, Haweenkooda iyo Caruurtooda. Indeed, Waxaad tahay Ilaaha Qaadirka ah  ayaa mar kale falsan ,
9. oo waxaan iyaga ku badbaadin ka dembi (masiibo) . Oo weliba kuwa aad kobciso ee (masiibo) maalinta dambiga , markaas, ayaa aad i siisidna nimcadii isaga  oo si  liibaan wayn  in. "
Aayadaha 10-12: Dawladdu waxay Gaalada Jahannamo, sida ay u doonayaan inay ka soo Baxaan cadaabta, cadhadii Ilaah ayaa iyaga, iyo guuldaradii ee shar ku wejiga run ah.
Tarjamada Surah Al Mu'min Aayadda 10-12
10.  Indeed, kuwii Gaaloobay , iyaga (maalinta) ku baaqay in si , "Run ahaantii, nacayb Ilaah (aad) waa wax badan ka weyn yahay nacayb naftaada in, marka aad yeedhay aamin ka hor aad diidi . "
11. Waxay Odhan, "Eebow, waad demiyo naga laba jeer  oo waxay u jeediyeen na on labo jeer (sidoo kale) , oo aan qirayaa dembiyadayada. Sidaas waa suroobi karaa waddo (noo) si ay u soo baxaan ( She'oolka) ? "
12.  Saas waxaa ugu wacan u Gaaloobaysaan idinkoo laydinku haddii korkiisa yeedhay Caabudno Eebe Kaliya. Oo haddii Ilaah la midoobin, waad rumaysan . Markaas go'aanka (maanta)  waa in Alle  ayaa mar kale Ilaaha Qaadirka ah .
 Eebe wa Allaah Subhaanahu kuu sheego in uu buugga weyn, wuxuu yimid xagga Ilaah ka yimid Ilaah istaahilo in la caabudo sababtoo ah si kaamil ah oo maxaa yeelay, wuxuu keliya oo uu shaqada.
 Iyada oo uu xoog uu sakhiray khalqiga oo dhan.
 Waayo, markii dadka yaa dembaabay.
 Wixii gaalada ama dadka buuse joogaa, kan dembiga oo ayan toobadkeenin waxaa ka mid ah.
 Marka Eebe wa Subhaanahu Allaah uu abuurayaa waxa uu ku saabsan oo uu si kaamil ah, halkaas oo ay u baahan tahay dhigay in uu keliya diibadahi oo kali ujeedooyinka uu samafal our, ka dibna wuxuu ku yidhi, "Waxaa jira Ilaah kale ma jiro (xaq u leeyahay in la caabudo laakiin wuxuu) . "
Kooxda haboonaanta kor ku xusan aayadda by leh hoos u dhaca Quraanka ka Eebe yaa sifooyinka kor ku xusan waa in guryaha u baahan tahay oo dhan macnaha daboolay Quraanka. Taasi waa sababta oo ah waxa ku jira Quraanka wax ku wacdiyo oo ku saabsan magacyada Ilaah, dabiicaddiisa iyo falimihiisii, halka aayadda kor ku xusan sheegayaa magacyada Ilaah, dabiicaddiisa iyo falalka uu. Waxa kale oo ay xukumi karaa ficillada ku wacdiyo, ee la soo dhaafay ka sarraysa iyo mustaqbalka, halkaas oo ay ka mid waxbaridda Eebe oge addoomadiisa. Wacdiyo laga yaabaa in uu ku saabsan Nicmada iyo culaysyo iyo sidoo kale xaalado ah in loo dhiibi karo, halka uu ku muujiyey eraygiisa, "Dzith thaul" (taasoo la micno ah, kuwaas oo uu leeyahay hadiyadda). Sidoo kale sheegi kartaa in uu ciqaab adag oo wax ka dhigaya qof lagu xukumay iyo sidoo kale kuwa sinaysta taas oo u baahan in rigoore, halkaas oo waxa muujiyay eraygiisa, "Syadiidil 'iqaab" (oo macnaheedu yahay, oo uu ciqaab adag). Waxa kale oo ku jiri kara call a Dambiile in ay toobad keenaan, iyo soo laabashada beristighfar, halkaas oo tani lagu qorey eraygiisa, "Ghaafiridz dzanbi wa qaabilit taubi syadiidil 'iqaab" (oo macnaheedu yahay: Yaa dembiyo cafiya oo aqbala loobada iyo darantahay Ciqaabtiisu ;). Can ayaa sidoo kale ku jira warar sheegaya in Ilaah uu yahay kan keliya oo xaq u diibadahi iyo fulinta qawl ah 'aqli (dareen) ama naqli ah (Malaku) in sidaas muujinaysaa, dhiirigeliyey, oo ka reebnay wax caabuda Eebe ka soo hadhay u sharaxay doodaha' aqli iyo naqli show dhaawac uga dhuumato iyo cabsi isaga, halkaas oo tani lagu qorey eraygiisa, "Laailaaha illaa badanleh," (oo macnaheedu yahay: oo meeshaasuna waxay Mooye Ilaah kale ma istaahilo in la caabudaysaan Eebe ka sokow). Wacdiyo laga yaabaa oo ku saabsan jaza'i sharciga (reply) uu sugnaaday Ajrigiisu cadaalad ah loogu talo galay dadka ku sameeyo Zakada, ciqaabta kuwii caasiyiinta ahaa, halkaas oo tani waxaa la tilmaamay hadalka imtithaal, "Ilaihil mashiir" (si ay u -Nyalah oo dhan dib). Tan waxaa lagu daboolay Quraanka kuwaas oo dalbaday sare.
 Eebe wa Subhaanahu Allaah dadka ogeysiiyo in uu jiro wax ay ku murmi aayaadka uu kuwa gaaloobey mooyee. Doodi ujeeddada halkan waa in ay u doodaya ujeedada diidayeen Aayaadka Eebe, xumaan, halkaas oo ay ka mid gaalo falalka qaban. Marka la barbardhigo Mu'miniinta, waxay ku soo gudbin Eebe wa Subhaanahu Allaah hoos run in ay ka gudbaan been. Sidoo kale, qofka waa in aan laydin khiyaanayn gobolka dhaw ee qofka, oo u malaysay in hadiyadda Ilaah baa isagii u eego jacaylka show adduunka isaga oo uu ku xaq. Sidaa darteed, Eebana wa Subhaanahu Allaah ayaa sheegay, "Haddaba waxaad (Nabiyow) dagin guusha ay gaareen dadaallada ay dalka oo dhan." Sidaa darteed waa qasab addoon ahaan waa qiyaastii ninku si Xaq ah, fiiri dabeecadda syar'i markaad beehaysaan kuna nin la socda, oo ma ay miisaamaan runta ee ku wajahan bini'aadamka, sidii lagu falay kuwii dadka aan haysan sayniska iyo sababta.
 Sababta oo ah meel final waa Jahannamo.
 Markaas Eebe wa Subhaanahu Allaah halis kuwa ku murmi aayaadka Eebe si ay u baajiso, sidii lagu falay kuwii by jiilka iyaga ka hor, sida Qoomkii Nabi Nuux, Caad, iyo kuwa kale ee xulufada wada dooneen cancel difaaco xaqa iyo Baadilka. Marka ay dhacdo in ay la go'aamiyo inay disho hoggaamiyaha raxmadda, oo rasuul u ah, kaasoo loo diray iyaga. Kanu miyaanu ahayn tilmaamaya Dulmi, xumaan iyo murugo, si aan marka laga reebo ma ka dib markii cadaab daran.
 Sida Caad, Thamuud, iyo kuwo kale.
 xiga ayaa dilay Rasuulladii.
 Iyadoo loo Gaala ah oo soo kulmiyo dhammaantood si ay ula dagaalamaan runta.
 Waxaa jira qaab Buuq cod weyn onkod iyo roobdhagaxyaale, waxaana dhulka liqay, tiimbadeen Badda ee, iyo wixii la mid ah.
 Sida qaynuunnadii ay khuseyso Eebe wa Subhaanahu Allaah ka ab ka hore iyo kuwa beeniyey, ka dibna waxay sidoo kale khuseeyaan kuwa hadda taasi diido.
 Eebe wa Allaah Subhaanahu sheego addoomada Eebe danqasho kaamil ah Subhaanahu wa Allaah Mu'miniinta, iyo bixinta si farxad sababa diyaariyo qaab ah sababaha keena in ka baxsan awoodooda, kuwaas oo codsi waayo, malaa'igta dhaaf soo dhoweeyey iyagii, salaaddana way u wanaagsan ee diinta iyo nolosha danbe, halkaas oo ay muujinaysaa ammaanta Malaa'igta kii 'Carshiga iyo degaannada ku hareereysan iyo sidoo kale in ay u dhow oo Eebahood Agtiisa ah, qaar badan oo ka mid ah Caabuda, iyo fikradahooda naseexeeyaan addoomo addoonkii Ilaah, sababtoo ah waxay ogaadana in Eebe wa Subhaanahu Allaah jeclaan ayay u sameeyeen.
 'Carshiga waa saqafka kulli waxyaalaha noolnool iyo dadkuba ugu weyn, ugu waynaa uguna ugu soo jiidashada, oo u dhow Eebe wa Subhaanahu Allaah. Carshiga Baaxadda koobeysaa Samooyinka, Dhulka iyo fadhigii Eebe iyo Malaa'igta. Iyada oo ay soo gudbiyeen Malaa'igta malaa'igtii Ilaah oo u dhali ugu weyn oo ugu awood badan. Subhaanahu wa Allaah Ilaah wuxuu u doortay inay qaadaan carshiga, ay mudnaanta siiyaan iyaga oo soo dhawaataan ay muujiyaan in ay yihiin malaa'igtii ugu muhiimsan wac. Allaah Subhaanahu wa Eebe wuxuu leeyahay, "Malaa'igtuna ku jira Samada ka badan-geesood. Oo maalintaas sideed Malaa'igta tiirin Carshiga Eebaha kor ku xusan (madaxa) iyaga "(Trans Al Haaqqah:. 17).
 Taas waxaa ka mid ah Malaa'igta soo dhoweeyey in Ilaah, oo waxay leeyihiin booska sidoo kale wuxuu kugula weyn.
 Waxa ka go'dayna waxay iyagii u sababta oo ah cibaadada Eebe wa Subhaanahu Allaah, gaar ahaan imisaa, tahmid iyo cibaadada oo dhan waxaa iska leh ee kuusha iyo tahmid. Sababtoo ah tusbaxa waa Subhaanahu wa Eebaa Daahiriya dabeecad aadanaha Allaah lagu caabudo oo isaga kasoo hadhay, halka tahmid waa Caabuda Eebe wa Subhaanahu Allaah. Sida Salaan, "Subhaanallahi wabihamdih" ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah waxa ku jira, iyo ka mid ah aad u badan cibaadada.
 Waxa ka mid ah tiro ka mid ah faa'iidooyinka iyo wanaagga rumaysadkiinnu waa, in malaa'igood oo haystay, dembi ma Dambi dhaaf warsan kuwa rumeeyey. Sidaa darteed, Mu'min ah in uu iimaan sababtoo ah helitaanka Samo falku inaad weyn of this.
 Sidaa dhaaf ayaa wax ku rakiban yihiin, kaas oo aan fiicnaan lahaa haddii dambi dhaaf iyada -in Intaa waxaa dheer in ay si deg deg ah qabtay maskaxda, in la weydiinaya dembidhaafka aawadiis-dembiyadooda in la cafiyo, markaas Eebe wa Allaah xuso Subhaanahu dabiiciga ah ee salaadda weydiisanaya denbi dhaaf by leh wax inuu noqon kaamil ah, in hadalka, "Eebow, nimcada iyo aqoonta jira ee aad ka mid ah wax walba, ku siiyo dambi dhaaf in ... iwm"
 Taas waa sayniska oo ah kan wax walba daboolaya, ma jiro caddayn aad iyo kagama Qarsoona Korkiisa waxba kaa sayniska ah oo miisaankeedu yahay qudhaanjada (iniin khardal) yar oo ay ku Sugan Samada iyo Dhulka, iyo nimco aad daboolayaa wax walba. Sidaa darteed, waa in labada dabiiciga sare iyo hoose ayaa ka buuxsantay fadliga Eebe ee imtithaal.
 From shirk iyo kuwa sinaysta.
 Taas waa Islaamka, taas oo dhab ahaan waa mentauhidkan Eebe, isaga maqlaan oo ay raacaan Rasuulkiisa.
 Taas iyaga dhawr Cadaabka laftiisa iyo sababaha.
 Iyada oo kaa rasuulladii afka.
 Waxay xaq ku noqdo rumaysadka iyo camalka wanaagsan noqday.
 itaalkeeda oo dembigiinna aad u dhaafi iyaga, oo aad uga takhalusi wax iyaga ka welwelin iyo aad u sheegtaa in ay wanaaggii oo dhan.
 Taas oo waxaa la dhigay meel wax. Sidaa darteed, ma aynu ku warsan wax menyelisihi xigmaddaada, oo xataa ay ku jiraan xigmad in aad ha rasuulladii aad afka iyo kuwo la doonayo by Nicmadaad, naxariis badan Mu'miniinta.
 Crime halkan waa hay'ad samafal ah oo xun tahay oo sidaas awgeed, maxaa yeelay, wuxuu mujrim murugo leh.
 Taas waa Maalinta Qiyaame.
 Maxaa yeelay, anoo nimco had iyo Wabiyadan socota annagoo addoommadaada ah, wax ka reebay ahayn Dambiyada Addoomadiisa ah iyo kuwa sidooda. Sidaa darteed, ku alla kii aad kobciso oo xun, waxa ay la micno aad taufik la siiyaa wanaag iyo inuu wax wanaagsan ku soo laabto.
, taasina waa khasaaraha ka mid ah wax laga walwalo sababtoo ah waxa ay u diiday dambiga iyo helitaanka waxyaalihii la jecel yahay, waayo, naxariis u qaadanno.
 jirto guul lahayn u eg yahay.
Sida Sa'diy Shaikh sharaxay in salaadda malaa'ig ku jira dhowr waxyaalood:
- Ogyahay ee ay (Malaa'igta) Eebahood.
- Bertawassul (taasi oo ka salaadda) in Eebe la magacyada uu u qurux badan, halkaas oo uu ka jecel yahay haddii addoommadiisii bertawassul.
- U soo ducee la isticmaalayo Asmaa'ul Husna ku haboon. Sidaa darteed, salaaddana codsanaya naxariis iyo weydiineysaa saaro ay saameyn ku leeyihiin nooca loo yaqaan aadanaha ceebaha Ilaah iyo dembile jecel yahay iyo sidoo kale ee aasaasiga ah iyo sababaha ay og yihin Ilaah, ka dibna ay bertawassul magiciisa Ar Raheem (Eebaha Raxmaan ah) iyo Al 'Aliim (The oge).
- Tam dabiicaddoodii ugu wajahan Allaah la rububiyyah aqoonsi (dayactirka) Eebe labada rububiyyyah 'aammah (guud ahaan) iyo khaashshah (gaar ah).
- Waxay ku isbedela (Malaa'ig) oo aan haysan awood kasta oo si aan baryadiinna ay Ilaah u ah ay ka Miskiin (u baahan) ka dhinacyada oo dhan, ma megemukakan karo xaalad kasta, oo ma aha, maxaa yeelay, hadiyadda Ilaah, naxariis iyo ihsan- uu.
- Sida laga soo xigtay Rabbiga Ilaahooda jecel yahay hay'ad samafal oo iyaga u jeclaatay, kuwaas oo caabudi ay sameeyaan oo ay macnaheedu waa sida celceliska, sida runta ah kuwa jecel. Sidoo kale, waxay jecel yihiin kuwa samo fala, sida Mu'miniinta, halkaas oo ay (Mu'miniinta) waa kuwa Ilaah jecel yahay xayawaanka dhexdooduu oo dhan. Aadanaha dhammaantiis wuxuu horey u mukallaf (waajib bandhigi) necbaan Insha Allaah marka laga reebo kuwa xaqa rumeeyey, ee jacaylka Malaa'igtu kuwii (Mu'miniinta) kuwa Ilaah baryaya oo ku jahaaday wanaagsan ee xaaladdooda, sida salaadda qof, oo ay ku jiraan caddaymo jacaylkiisa , sababta oo ah mid uusan ku baryayaaye, marka laga reebo kuwa uu jecel yahay.
- Laga bilaabo sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan Ilaah dambi dhaaf Malaa'igta ka jiro rikoor ah in aan u baahanahay in ay ogaadaan sida mentadabburi (fikirka) uu Kitaabka, iyo tadabbur in aan ku xaddidnayn lafaz macnaha qaybta ka, xitaa waa uu mentadabburi taasoo la micno ah (content) lafaz. Haddii uu fahamsan yahay habka ku habboon fahamka run, ka dibna uu maanka by wuxuu arkay in arrin iyo wadada isaga oo daallan, wax noqdo penyempurnanya oo ku xiran tahay isaga, iyo inuu rumaysan karo in Ilaah doonayo, sida uu aaminsan yahay macnaha gaar ah oo lagu qorey ah lafaz.
Baahida loo qabo in la qeexo waa in Ilaah Subhaanahu wa Allaah doonayay laba waxyaabood:
Marka hore, qirtaan oo ay xaqiijinayaan in uu ka mid ahaa ka qayb macnaha iyo hoosaysiiyey isaga.
Marka labaad, aqoonta in Ilaah wax walba waa ogyahay, iyo in Eebe addoomadiisa ku amray inay mentadabburi iyo qabaa buugaagta uu.
Eebe wa Subhaanahu Allaah og wax la xidhiidha macnaha waxaa ka mid ah, oo kii isaga ku wargeliyay in uu buugga waa hage, iftiinka iyo wax walba oo sharaxaadda, oo uu yahay kan hadalka ugu codkar ah iyo meesha ugu cad. Sidaas darteed, addoon ka heli kartaa wax badan oo aqoon iyo naxariis weyn oo waafaqsan taufiq Ilaah isaga siiyey.
Laakiin mararka qaar ka mid ah Aayaadka duugi macnaha caafimaad kale oo aan ahayn cilmi maleeyeen. Sidaa darteed waxaan Eebe wa Subhaanahu Allaah weydiiso in uu inoo furayay inta badan naxariis khasnadda wanaagsan sababtoo ah xaaladaha iyo Muslimiinta. Waxaan waxba ma aan samayn karo laakiin ay ku tiirsan yihiin samafal ee uu bertawassul oo uu sadaqo; halkaas oo aanu had iyo jeer ku jira in mar kasta iyo waqti kasta. Sidoo kale, waxaan Ilaah weydiiso fadligiisa inuu dan inooga soo waxyaalood oo shar ah ayaannu ah in celisaan noo inay u yimaadaan oo nimcadiisa, sida xaqiiqada ah uu khayrka, kaas oo ku siinaya sabab iyo musabbabnya.
- Laga bilaabo aayaadka kor ku xusan waxa kale oo loo arki karaa in Saaxiib, xaaskiisa wanaagsan, carruur iyo saaxiibada noqon karo mid faraxsan saaxiibbadiis, oo waxaa la xidhiidha sababta wanaag ah in la helay, oo ka baxsan samafal iyo sababta oo ah hay'ad samafal sida Malaa'igta u duceeyaan Mu'miniinta iyo dadka kuwa xaqa ah ka suubanaada oo ah Aabayaalkood, Haweenkooda iyo Caruurtooda, wallahu og.
 Eebe wa Allaah Subhaanahu wargeliyaan ku saabsan furitaanka ceeb iyo dulli dhaco wixii ku dhacay kuwii gaaloobay, wixii ay weyddiisteen inuu ku soo laabto adduunka iyo ka baxo cadaabta, oo ay weyddiisteen lama siiyo, oo waxay dicelanya.
 xuso ah "gaalada" buuxda si ay u daboosho dhammaan noocyada gaalnimo, sidoo kale gaaloobay kulubtiisa, Rasuuladiisa, dhammaadka maalinta, iwm Eebe, ..
 Taas waa marka ay naar oo ay qiratay inay inay xaq u leedahay in aan galno, oo dembigiinna aawadiis ay qabtaan, ka dibna markii ay aad u cadhooday naftooda ugu Cadho weyn yihiin, ka dibna u yeedhay markii ay sida uu xusay qodobka kor ku xusan waxaa lagu ,
 rasuulladii iyo kuwa raacsan ay markaas rumaysad iyo waxay ku tiiriya cadeyn ah, oo weliba waa inaad xitaa dafiraan iyo iimaanka in Eebe idin abuuray, waayo waxaad neceb tahay, iyo xataa idinka Bixiyo naxariis ballaaran, sidaa daraaddeed cadhadii Ilaah ayaa idinka soo hor jeedda, oo cadho waa wax badan ka weyn kemurkaanmu naftaada si. Cadhadiisii ​​iyo ciqaab si ay u sii wadaan kugu dhacaan, intay addoommadiisii ​​mu'miniin helaan Raalli ahaanshaha Eebe iyo ajir. Taasi waa marka ay ku riyoon jiray laabtay dunida sida lagu sifeeyey xubinta qoraalka xiga.
 Ujeeddada dhimashada labo jeer waa dhimashada ugu horeysay iyo dhimashada u dhexeeya labada buunka. Qaar ka mid yihiin fikir ah in dhimashada ugu horeysay ee waa marka ay tahay ma jiraan iyo dhimashada labaad waa dhimashada dhacda ka dib markii ay mariyo dunida.
 Taas waa nolosha Adduun iyo Aakhiraba.
 oo ay soo noqdaan si ay adduunka u hogaansamo Eebahanno.
Waxay ka qoomameyn mar si ay u guuraan qaldan marka dunida oo dhan oo wuxuu ku yidhi, sida ku xusan qodobka kor ku xusan, in kastoo erayada ahaayeen waxba idiinma tarin oo ay isticmaalaan dhammaan.
 Waxa ay ku dhaleeceeyay ma sameeyo sababo la xiriira amaankiisa.
 Waxa aad ka raalli noqday wax xun oo burburiyey Adduun iyo Aakhiraba (shirk), oo wax wanaagsan oo xaq ah Adduun iyo Aakhiro (tawhid) waxaad neceb tahay. Waxaad la midah ahayn, sababtoo ah murugo, dulli iyo cadhadayda, oo idinkuna nebcahay, maxaa yeelay farxad, ammaan iyo raalli. Waxaa, sida erayga imtithaal soo socota:
"Waxaan dadka naftiisa ku faantay in dhulka dhexdiisa xaq ka mid ah calaamadaha aan awood u noqon doonaa. Haddii ay arkaan wax Aayado (KU), iyagu ma ay rumaysan doonaan isaga. Hadday Gaaladu arkaan Jidka jidkuna waa hanuunka, iyaga oo aan rabin, laakiin haddii ay Arkaan Waddada Baadidana waxay ka sii memenempuhnya. . Saas waxaa ugu wacan inay ka gaaloobeen Aayaadkanaga, waxaana ay mar walba la socon isaga "(. Trans Quraanka: 146)
 Haddii go'aanka iska leh isaga, markaas uu go'aansaday in aad, gaalada O noqon doonaa waari in jahanamo iyagoo ku waari, iyo go'aan aan la bedelay iyo bedelay.
 Waxa uu yahay Sovereign waadaxa ah ee dhinacyada oo dhan, ee ka mid ah uu, sare booskiisa sare, oo sarajooggeeduna wuxuu ka mid ah awoodaha uu. Mid uu meel sare ka mid ah waa caddaalad ugu fiican Ilaah Subhaanahu wa Allaah, iyo in uu waxkasta meel hana Gallobayse u dhexeeya kuwa ka Dhawrsada Eebe kuwa aan rumaysnayn.
 Waxa uu leeyahay weynaantiisa, haybadda iyo ammaan, sidoo kale magiciisa, oo uu dabeecadda mupun uu camal quduuska ah oo wax ka maqan iyo waxaa dhiman.
Posted by needsjobslowongankerja at 7:41 PM